Sale & Marketing Archives - Page2of4- Glory Assumption Space
Sales & Marketing Staff – Female(5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။Laboratory Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing Staff – Female(5)Posts / Salary – 200,000 Kyats / Lanmadaw Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff – Male/Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ဗဟန်းတွင်ရှိသော Japan Car Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Staff – Male/Female (5)Posts /Salary – 250,000 Kyats /Bahan Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English စာအခြေခံနားလည်ရမည်။ - ကားပိုင်း နှင့်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်အထက်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales and Marketing– Male/Female (10) Posts /Salary -150000 Kyats
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Digital Printing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales and Marketing– Male/Female (10) Posts /Salary -150000 Kyats /Tharkayta Township - Any Graduate (or) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ - အသက် ၂၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိူင်သည်။ လုပ်ငန်းအပေါ်တွင်ရိုးသားကြိုးစားစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.-09- 263119775, 09-262223785, 09-977397705, 09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ [caption id="attachment_1400" align="alignnone" width="424"] Image of female hands on the keys typing documents[/caption]
Sales and Marketing Staff- Female (5) Posts
Sales and Marketing Staff – Female (5)Posts / Salary – 150,000 Kyats (above) / Yankin Township. - တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - IT Networking ပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြှုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများအား Training ပေးပါသည်။
မင်္ဂလာရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသေ Promotion Product Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိပါသည်။ Sales & Marketing Staff - Female (10) Posts /Salary – 200000 Kyats / Lanmadaw Township (ဘွဲ့ ရ ၊ ကွန်ပျုတာ အင်္ဂလိပ်အသင့်တင့် ၊ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူ ၊ ချိုသာ၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းသူ ၊ Marketing အတွေ့ အကြုံသင့်တင့်၊ အပြင်သွားနိုင် ခရီးထွက်နိုင်၊ အသက် ၂၀-၃၀ကြား၊ စာချုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်) မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing – Male/ Female (10 )Posts /Salary – 150000 Kyats
မင်္ဂလာပါ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales & Marketing – Male/ Female (10 )Posts /Salary – 150000 Kyats / Tharkayta Township - ဘွဲ့ရ (သို့ ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ - အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - English လိုအသင့်အတင့်ပြောတတ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.-09-263119775, 09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff - Female (10)Posts
Sales & Marketing Staff - Female (10) posts / Salary - 130,000 Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1	. Sales & Marketing Staff - Female (10) posts / Salary – 130,000 Kyat / Pazuntaung Township. - ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်ရှိရပါမည်။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားပြောပြေပြစ်ရပါမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_1302" align="alignnone" width="385"] Every woman needs to indulge now and then[/caption]
Sales and Marketing Staff- Male/Female (5) Posts
1. Sales & Marketing Staff – Male /Female (5)Posts /Salary – 250000 Kyats /Bahan Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English စာအခြေခံနားလည်ရမည်။ - ကားအရောင်းပိုင်းဖြင့်အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်အထက်ရှိရမည်။
Sales and Marketing- Male/Female (5) Posts
1. Sales and Marketing Staff- Male/Female (5) Posts/Salary- 200,000 Kyats (above)/Bahan Township. - ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - English စာ အခြေခံနားလည်ရမည်။ - ကားပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ့ (၁) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
မင်္ဂလာပါရှင့် ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales and Marketing Staff- Female (5) Posts/ Salary-250,000 Kyats/Bahan Township. - ဘွဲ့ရ - English စာကောင်းမွန်ရမည်။ - Experience 1 Year မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09- 263119775, 09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff – Male/Female (30 )Posts /Salary -120000Kyats
မင်္ဂလာပါ ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales & Marketing Staff – Male/Female (30 )Posts /Salary -120000Kyats / Tharkayta and Mayangone Township - အထက်ပါရာထူးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘွဲ့ရ(or) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ ၂နှစ်ရှိရမည်။ - English စာအသင့်အတင့်ရရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Location in : တာမွေ
မင်္ဂလာပါရှင့်။Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales & Marketing – Female (5)Posts /Salary – 200000 Kyats +++ /Tarmwe Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Cosmetic အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Assistant - Male (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Sales & Marketing Assistant (For Coppier Machine) - Male (5) Posts / Salary 120000 Kyats / Thingangyun Township Requirements -	Any Graduate or ၁၀ တန်းအောင် -	အတွေ့အကြုံရှိသူ ပိုဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales & Marketing Staff -Female (15) posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales & Marketing Staff - Female (15) Posts / Salary 150000 Kyats / Lanmataw,Thingangyun Township Requirements - ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Basics. - Marketing ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရပါမည်။ - ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )